ကမ္ဘာနိုင်ငံများကိုDr. Sasa ဒဲ့ပြောလိုက်ပြီ - Update News
ကမ္ဘာနိုင်ငံများကိုDr. Sasa ဒဲ့ပြောလိုက်ပြီ
March 14, 2021 March 14, 2021 - by Best_admin
မြန်မာပြည်ရဲ့ဖြစ်သည့်ပြဿနာသည် ပြည်တွင်းရေးမဟုတ်ပါ နိုင်ငံတကာရဲ့မတည်မငြိမ်မှုအရေးသာဖြစ်သည် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ပြည်သူတွေကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချခဲ့တာတွေက စစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တာ အခြေခံဥပဒေသည်လည်း သူတို့စိတ်ကြိုက်နှစ်ပေါင်းများရေးဆွဲခဲ့သည် ဥပဒေသာဖြစ်သည်
ငါတို့နိုင်ငံကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်ပြဿနာများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး NLD ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး စစ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာယခုအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှားခဲ့တာတွေကိုပြောနေရမယ့်အချိန်မဟုတ် နိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်းများနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ (တရုတ် ရုရှား အိန္ဒိယ)မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ကြပါ ငါတို့နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရဖို့ဆိုတာငါတို့နိုင်ငံ တစ်ခုတည်းအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး
အာစီယံနိုင်ငံများရော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရဲ့လုံခြုံအရေးအတွက်ရော အရေးကြီးလို့ပြောနေတာ ကမ္ဘာနိုင်ငံများအာစီယံနိုင်ငံများ တရုတ်အိန္ဒိယအပါအဝင်အားလုံး မြန်မာပြည်သူများရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့အတူရပ်တည်ပေးကြပါ မြန်မာပြည်သူများနှင့်မရပ်တည်ပေးပါကမတည်မြငိမ်ဖြစ်နေတာအားလုံးသည် မင်းတို့ရပ်တည်ချက် မင်းတို့ကြောင့်သာဖြစ်သည် ငါတို့ပြည်သူဆန္ဒနဲ့အတူရပ်တည်ပေးကြပါ UN မှာဗိဒိုအာဏာသုံးခဲ့တဲ့ တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဟိုရက်က နောင်တချိန်သမိုင်မှာစကားပြောမယ် ပြည်သူအစိုးရဖြစ်ပေါ်လာချိန်ပတ်သတ်မှု မရှိစေရဘူးလို့လည်းပြတ်သားစွာပြောခဲ့သည်
ရိုးသားလေးစားအတုယူထိုက်သည့်မြန်မာ သံတမန် Dr. Sasa ကို
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ျဖစ္သည့္ျပႆနာသည္ ျပည္တြင္းေရးမဟုတ္ပါ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕မတည္မၿငိမ္မႈအေရးသာျဖစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ျပည္သူေတြကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့တာေတြက စစ္တပ္ကလုပ္ခဲ့တာ အေျခခံဥပေဒသည္လည္း သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားေရးဆြဲခဲ့သည္ ဥပေဒသာျဖစ္သည္
ငါတို႔ႏိုင္ငံကမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည္ျပႆနာမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ပါဘူး NLD ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ပါဘူး စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေနတာယခုအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွားခဲ့တာေတြကိုေျပာေနရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား (တ႐ုတ္ ႐ုရွား အိႏၵိယ)မင္းတို႔ဆုံးျဖတ္ၾကပါ ငါတို႔ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈရဖို႔ဆိုတာငါတို႔ႏိုင္ငံ တစ္ခုတည္းအတြက္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး
အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားေရာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕လုံၿခဳံအေရးအတြက္ေရာ အေရးႀကီးလို႔ေျပာေနတာ ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားအာစီယံႏိုင္ငံမ်ား တ႐ုတ္အိႏၵိယအပါအဝင္အားလုံး ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔အတူရပ္တည္ေပးၾကပါ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္မရပ္တည္ေပးပါကမတည္ျမငိမ္ျဖစ္ေနတာအားလုံးသည္ မင္းတို႔ရပ္တည္ခ်က္ မင္းတို႔ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ ငါတို႔ျပည္သူဆႏၵနဲ႔အတူရပ္တည္ေပးၾကပါ UN မွာဗိဒိုအာဏာသုံးခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔႐ုရွားကိုလည္းဟိုရက္က ေနာင္တခ်ိန္သမိုင္မွာစကားေျပာမယ္ ျပည္သူအစိုးရျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္ပတ္သတ္မႈ မရွိေစရဘူးလို႔လည္းျပတ္သားစြာေျပာခဲ့သည္
႐ိုးသားေလးစားအတုယူထိုက္သည့္ျမန္မာ သံတမန္ Dr. Sasa ကို
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ဝရမ်းပြေးဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ဂုဏ်ယူတယ်လိုဆိုတဲ့ ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည်
ကျောက်ကပ်ပေးပြီး လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခဲ့ ပေမဲ့လည်း အဆုံးသတ် မလှခဲ့တဲ့ အမျိုးသားရဲ့အဖြစ်
Previous Article ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ (တပေါင်းလဆုတ် ၂ ရက်) တွင် နိုင် ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ် မည်ဟု နက္ခတ်ပညာရှင်ဟောကိန်း ထုတ်
Next Article ခုတော့ကမ္ဘာ့မျက်နှာစာမှာ မရှိတဲ့သောက်ရှက် ထပ်ကွဲပြန်ပြီ
တိုက်ဆိုင်လို့ မခံနိုင်ရင် ဘလော့သွားကြပါ…ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ ဘဝမရောက်ခင် ပြင်သင့်တာကိုပြင်ပါ
ရိုး အ လွန်းတဲ့ မြန်မာတွေနှင့် တမာပင်က ထန်းရည်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်းအကြီးစားရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်း
အခမဲ့ဆေးကုပေးပြီး ထမင်းပါကျွေးတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးအတွက် ဆန်အိမ်တွေ လာလှူတဲ့ လယ်သမားကြီး
ဘဝတွေရင်း အချိန်တွေရင်းနေရတဲ့ အောက်ခြေရဲဘော်လေးတွေကိုသနားပါ
TIKTOK မှာ ပထမဆုံး FOLLOWERS သန်း(၁၀၀) ပြည့်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
သားငယ်အတွက် ဆေးကုသစရိတ်မတက်နိုင်တော့လို့ဆိုပြီး ဆေးရုံရှေ့မှာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေခဲ့တဲ့မိခင်
အရက်ကြိုက်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ ဒီအပင်… အညာမှာ သိပ်ပေါတယ်
နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ရမ ယ့် သူမ ရှိ လို့၊ အပျိုစင် ဘဝ ကို လေလံတ င်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေ
2021 မှာ ကံအကောင်း ဆုံး ဖြစ်လာ မယ့် ရာသီခွင်( ၄ )ခု
ကမ္ဘာကျော် FORBESမဂ္ဂဇင်းရဲ့ အာရှ DIGITAL STAR အယောက်(၁၀၀)စာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
Finalပွဲမှာ မြန်မာတွေအတွက်ဂုဏ်ယူရတဲ့ နဂါးနီသီချင်းကို ဆိုင်းကိုကိုယ်တိုင်တီးပြီး အံ့သြရလောက် သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ခင်ရတနာစိုး
မကြေပွဲပြန်လည်ထိုးသတ်ဖို့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ရှေ့ကို ရောက်ရှိလာတော့မယ့် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်း
ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေမြင်ရတိုင်း ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်း တကယ့်ကိုထပ်တူထပ်မျှ ကြေကွဲခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်